10 meelood oo safarro saaxiibtinimo u leh Mareykanka iyo adduunka oo dhan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » LGBTQ » 10 meelood oo safarro saaxiibtinimo u leh Mareykanka iyo adduunka oo dhan
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • Crime • kariska • dhaqanka • Wararka Fashion • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Xuquuqda Aadanaha • LGBTQ • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Nasiib darro, dadka safarka ah ee LGBTQ+ weli waa inay xusuusnaadaan nabadgelyada iyo welwelka sharciyada meelaha qaarkood ee adduunka, iyadoo khaniisnimadu ay weli sharci darro ka tahay 69 dal.
Orlando, Florida waa magaalada ugu saaxiibtinimada badan Maraykanka oo ay ku nool yihiin dad badan oo LGBTQ+ ah.
Palm Springs ayaa gashay kaalinta labaad waxayna leedahay mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee dadka deggan LGBTQ+ ee Mareykanka.
Palm Springs waxay si gaar ah ugu dhibco badan tahay ammaankeeda iyo hoygeeda badan.
Maaddaama xayiraadaha safarka ay sii kordhayaan, safarro badan oo rajo leh ayaa ballansanaya safarada dibedda, oo ay ku jiraan bulshada LGBTQ+.
Si loo hubiyo LGBTQ + beeshu waxay dareemaan ammaan iyo raaxo marka ay safrayaan, khubarada warshaduhu waxay qiimeeyeen meelaha loo maro guud ahaan Mareykanka iyo adduunka oo dhan iyadoo lagu saleynayo arrimo daboolaya saaxiibtinimadooda LGBTQ, iyo sidoo kale waxyaabo ay ka mid yihiin xulashooyinka hoyga iyo awood -u -lahaanshaha, si loo muujiyo meelaha ugu badan ee fasaxa saaxiibtinimo ee LGBTQ+.
10ka ugu sarreeya LGBTQ+ meelaha saaxiibtinimo ee Mareykanka
Rank dareenka Anti-antidhibcaha takoorka Tirada dhacdooyinka LGBT Dhibcaha tusmada amniga Baararka & naadiyada ku qoran Tripadvisor 100,000 qofba Tirada hudheelada 100,000 qofba Celceliska qiimaha hudheelka habeenkii (dhammaadka toddobaadka) ($) LGBTQ+ dhibco /10
2 Palm Springs, Kaliforniya 100 5 64.14 10 6,214 $ 224 6.29
4 Magaalada New York, New York 100 16 52.73 7 276 $ 213 5.94
6 Magaalada Iowa, Iowa 100 0 75.29 15 81 $ 99 5.83
9 Austin, Teksas 100 4 63.31 18 345 $ 202 5.53
Orlando waa magaalada ugu saaxiibtinimada badan USA oo leh baaxad weyn LGBTQ + tirada dadka. Sidoo kale inay noqoto magaalo dulqaad leh oo aqbasha (iyadoo Walt Disney World ay martigalinayso dhacdooyinka sanadlaha ah "Maalinta Gayga"), Orlando waxay leedahay baararka iyo naadiyada aad u sarreeya (40 qof 100,000 oo qofba) iyo u dhawaanshaha Walt Disney World waxaa loola jeedaa inay jiraan sidoo kale tiro aad u badan oo hudheelo ah aagga (8,941 100,000 qofba).
Allen Meraz wuxuu leeyahay,
September 22, 2021 at 21: 30
Hmm. Ku dhawaad ​​waxay u maleeyeen in tani ay ka timid Basasha. Waxaa qoray Harry Johnson .. waxaadna u malaynaysaa inay sharci ka noqon doonto 69 Waddan .... 🙂